Altocumulus | Saadaasha Shabakadda
Waxaan sii wadaynaa dib u eegista noocyada daruuraha kaladuwan ee ay keyd u tahay Ururka Saadaasha Hawada Adduunka (WMO). Munaasabaddan waxaan ku bilaabaynaa inaan falanqeyno daruuraha dhexe waxaanan ku bilaabi doonnaa sharraxaadda astaamaha, asalka iyo xiisaha kale ee Altocumulus.
Daruuraha noocan ah waxaa lagu sifeeyaa inuu yahay bangi, lakab khafiif ah ama lakabyo daruuro cad ama cirro leh, ama caddaan iyo cawl labadaba, kuwaas oo leh hooska ka samaysan taayirro, tirooyin isdaba-joog ah, rollers, iwm, kuwaas oo mararka qaarkood qayb liita ama baahin iyo in laga yaabo ama aan la midoobin; badankood cunsurro yaryar had iyo jeer loo qaybiyo, waxay leeyihiin ballac muuqda oo u dhexeeya 1º iyo 5º.
Badanaa waxay ka kooban yihiin dhibco biyo ah. Marka heerkulku aad u hooseeyo, kiristaalo baraf baa samaysma. Bilowgeedu wuxuu ahaan lahaa sidan soo socota, marka hawad ballaaran oo ballaaran, oo ay riixdo nidaamka wejiga hore, ay kor ugu kacdo heerarka dhexe (4-6Km.) Oo markaa ka dib isku urura. Dhanka kale, daruurahaas waxaa sameeyay cufnaanta hawo xasilloon, taas oo siinaysa muuqaalkooda cumuliform. Badanaa waa qeyb ka mid ah jihooyinka qabow iyo dhinacyada diiran. Xaaladda dambe waxay ku dhexjiraan hal lakab oo leh Altostratus, iyagoo haysta ballaarin kumanaan kiilomitir oo laba jibbaaran.
Haddii ay tilmaamo naga siinayaan cimilada soo socota, waxaa la ogyahay in kuwa go'doonsan ay muujinayaan cimilo wanaagsan. Dhinaca kale, haddii ay u muuqdaan koror ama lagu qaso Altostratus waxay tilmaamayaan kan u dhawaanshaha hore ama duufaan. Xaaladahaas waxay bixin karaan roobab. Waa inaan lagu qaldin Cirrocumulus, Altocumulus-ka ayaa ka weyn, iyo midka loo yaqaan 'Stratocumulus', maxaa yeelay Altocumulus-ka ayaa ka yar.
Si aad u sawirto daruuraha ku habboon ayaa ah iftiinka dambe, sida sawirka guud, waxay muujinayaan muuqaal cabsi leh. Saacadaha hore ee subaxnimada ama galabtii faahfaahinteeda sifiican ayaa loo qiimeeyaa. Iyadoo muraayadda "xagal ballaadhan" lagu qabtay dhammaan weynaantooda. Gabbaldhaca, waxay si kooban casaan ugu noqdaan.
Altocumulos wuxuu ku dhici karaa 4 nooc (Stratiformis, Lenticularis, Castellanus iyo Floccus) iyo 7 nooc (Translucidus, Perlucidus, Opacus, Duplicatus, Undulatus, Radiatus, Lacunosus).
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » Altocumulus-ka